Open Call | Human Rights Human Dignity International Film Festival (HRHDIFF) | Myanmar
၃။ ရုပ်ရှင်တွင် ပါရှိသောနောက်ခံဂီတနှင့် သီချင်းတို့၏ မူပိုင်ခွင့်ကို ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာက အပြည့်အ၀တာဝန်ခံရမည်။
၅။ ဒါရိုက်တာ၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းပူးတွဲပေးပို့ရမည်။
၆။ ဒါရိုက်တာ၏ဓါတ်ပုံ၁ပုံပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးမှာ High Resolution ဖြစ်ရမည်။
၇။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်း ဓါတ်ပုံ၂ပုံသို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်ပိုစတာ ၁ခုပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးမှာ High Resolution ဖြစ်ရမည်။ အထက်ပါ ဓါတ်ပုံများကို CD တစ်ခုထဲတွင် ထည့်ပြီးပေးပို့ရမည်။
၈။ ရုပ်ရှင်ကို DVD ၂ချပ် သို့မဟုတ် Blu-ray ၂ချပ် ပေးပို့ရမည်။
၉။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပြသရန်ရွေးချယ်ခံရသော ရုပ်ရှင်စာရင်းကို HRHDIFF ၀က်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြိုတင်ကြေညာမည်။ပြသရန်ရွေးချယ်ခံရသည့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူ Filmmaker များထံအကြောင်းကြားမည်။ ပြသမှုအရည်အသွေးအတွက် Filmmaker က ရုပ်ရှင်ကို .mpg သို့မဟုတ် .mp4 သို့မဟုတ် .mov ဖိုင်ဖြင့် ထပ်မံပို့ပေးရမည်။ အချိန်မီရောက်ရှိမလာသော ရုပ်ရှင်၏ပြသမှုအရည်အသွေးမှာ Filmmaker ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၁၀။ ပြည်တွင်းရုပ်သံလိုင်းများတွင် ထုတ်လွှင့်ပြသပြီးသောရုပ်ရှင်များ၊ အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ကြည့်ရှုရန် လွှင့်တင်ထားသောရုပ်ရှင်များနှင့် ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် ပြသပြီးသောရုပ်ရှင်များကို ရွေးချယ်မည်မဟုတ်ပါ။
၁၁။ ရုပ်ရှင်ပေးပို့ရာတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပုံစံ ၁ခု ကိုရုပ်ရှင်၁ကားအတွက်သာအသုံးပြုရမည်။ ရုပ်ရှင်၂ကားဖြစ်ပါကနောက်ထပ် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပုံစံဖြင့်ပေးပို့ရမည်။
၁၂။ ပေးပို့ပြီးသောရုပ်ရှင်ကားများကိုပြန်လည်ထုတ်ပေးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အဖွဲ့အစည်း၏ Film Library တွင် ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁၃။ ပေးပို့ထားသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်ခန်းဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ် ပိုစတာများနှင့် ဒါရိုက်တာ ဓါတ်ပုံများကို ရုပ်ရှင်ပွဲတော် လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းများ၊ မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုမည်။
၁၄။ ပြသရန်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသော ရုပ်ရှင်ကားများကိုသင့်လျော်ရာ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် ပြသနိုင်ရန်ပေးပို့သွားပါမည်။
၁၅။ ပြသရန်ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ရှင်များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြားမြို့ရွာများတွင် ပြုလုပ်သည့် ခရီးသွားရုပ်ရှင်ပွဲတော်များ၌လည်းပြသမည်။ နိုင်ငံတကာအခြားဆက်စပ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင်လည်း ပြသသွားမည်။
၁၆။ ပြသရန်ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ရှင်များကိုပြည်တွင်းရုပ်သံလိုင်းများတွင် အခါအားလျော်စွာ ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ရန်ကြိုးစားသွားမည်။
၁၇။ ဆုရွေးချယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဒိုင်လူကြီးများ၏ ရွေးချယ်မှုသည်သာ အတည်ဖြစ်သည်။
၁၈။ ၁၁ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၇ ထက်နောက်ကျရောက်ရှိလာသော ရုပ်ရှင်များကို လက်ခံစဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၁၉။ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ ရုပ်ရှင်များပေးပို့ခြင်းသည် အထက်ပါအခြေခံစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လက်ခံသိရှိသဘောတူပြီးဖြစ်ကြောင်း အဓိပါယ်သက်ရောက်သည်။
လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ ရုပ်ရှင်ကားများပေးပို့ရန် လမ်းညွှန်ချက်
ကျေးဇူးပြု၍ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ထံသို့ ရုပ်ရှင်မပေးပို့ခင် သတ်မှတ်ထားသော အခြေခံ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးပါ။
ရုပ်ရှင်များပေးပို့ရာတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ပုံစံတစ်ခုကို ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက်သာ အသုံးပြုပါ။ ပေးပို့ရမည့်အထောက်အထားများမှာ
(၁) DVD ၂ချပ် သို့မဟုတ် Blu-Ray ၂ချပ်
(၃) ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း
(၄) ဒါရိုက်တာ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
(၅) ဇာတ်ကားအပေါ် ဒါရိုက်တာ၏ သဘောထားအမြင်
(၆) ဒါရိုက်တာ ဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ၊ ဇာတ်ဝင်းခန်းဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ သို့မဟုတ် ပိုစတာ ၁ ခုပါရှိသည့် CD ၁ချပ်
ရုပ်ရှင်များနှင့်အတူ ပြည့်စုံသော အထောက်အထားများကို အောက်ပါလိပ်စာသို့ ၁၁ ရက် ဧပြီလ ၂၀၁၇ နေ့ ညနေ ၅နာရီ အရောက်နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရမည်။
လိပ်စာ : အခန်း(အေ)၈၀၇၊ ၈ လွှာ၊ တာဝါ (အေ)၊ ၉မိုင် Ocean၊ သီရိကွန်ဒို၊ ပြည်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
မရှင်းလင်းသည့် အချက်များကို အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း : ၀၉ ၄၅၀၀ ၅၂၃၉၂
Download Submission Form Myanmar Version
Download Submission Form English Version
Rules and Regulations for international film submission
1. Must have English subtitles if the film is not in English.
2. Film duration is not limited.
3. Filmmaker must have royalties for background music and songs used in the film. The use of original music or royalty-free music is strongly recommended but not mandatory for Festival submissions.
4. Must encloseaCD with:
(a) Dialogue list in English
(b) Synopsis of the film
(c) Director’s biography
(d) Director’s statement of the film
(e) One photo of the director
(f) Two promotional stills of the film orafilm poster. All images should be high resolution.
5. Must submit2DVDs or2Blu-ray discs of the film for the preview.
6. Selected films for screening in the HRHDIFF will be announced in advance on www.hrhdiff.org. HRHDIFF will inform filmmakers via email and will request to send .avi / .mpg / .mp4 or .mov files for screening in the Film Festival.
7. Films shown in any local film festival, on local TV channels and on the Internet are not eligible for submission.
8. Must useaseparate submission form for each film.
9. Once submitted, films may not be withdrawn from participation at the HRHDIFF. Submission DVDs and Blu-Ray discs will not be returned and filmmaker gives permission to the HRHDIFF to retain DVDs, Blu-Ray discs and promotional materials as part of its Festival library.
10. Local language, Burmese subtitle will be put into the films selected for screening at the Film Festival.
11. Selected films may be screened one or multiple times at various traveling film festivals during and after the Festival.
12. Filmmaker hereby grants HRHDIFF the rights to use all or part(s) of the film for promotional purposes; to use stills, biographical material, names and likeness from the film for promotional purposes and in Festival program, to show the film at press screenings and to exhibit the film during the Festival and at any time before and after the Festival.
13. Festival juries shall determine selections and award winners at their sole discretion.
Guideline for the submission for international films
Submission deadline is 11 April 2017.
Please read Rules and Regulations carefully before submitting your film. Please use one submission form for one film.
Required documents for the submission are:
1.2DVDs or2Blu-ray discs
3. A CD with:
Online submission is not yet available. Film and required documents should be submitted to the following address:
Room A 807, 8th Floor, Building A, Thiri Condo,9Mile Ocean, Pyay Road, Mayangone, Yangon, Myanmar